Imandarmedia.com.np: काठमाडौंमा हरेक बर्ष किन मनाइन्छ इन्द्रजात्रा ? यस्तो छ कारण
Big News, Main News, News » काठमाडौंमा हरेक बर्ष किन मनाइन्छ इन्द्रजात्रा ? यस्तो छ कारण
काठमाडौंमा हरेक बर्ष किन मनाइन्छ इन्द्रजात्रा ? यस्तो छ कारण
देवराज इन्द्रको पूजा–आराधना गरी मंगलबार परम्परागत रुपमा इन्द्रजात्रा पर्व मनाइँदैछ ।
२०७४ भदौमा २० मा प्रकाशित ।